Raali galinta dadka: Baro sida loo saxo qaladka
Markuu qalad kaa dhaco waxaad u baahantahay raali galin, in lagu raali geliyo. Sidaas si lamid ah ayuu qofka kalena kaaga baahanyahay inaad ka raali galiso. Haddii aan nahay biniaadam waxaan sameyneynaa qaladaad fara badan, balse taasi macnaheedu ma ahan ineynu nahay dad xun. Markaan qalad galno waxaan u baahanahay inaan barano sida loo saxo qaladka. Qofka qalbiga wanaagsan waa kan ka damqado qaladaadkiisa iyo waxa uu sameeyay. Haddii qalad ogaal u gasho misana aadan ka damqa